This Post is suspended by Mod – (6) . | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cover Faces » This Post is suspended by Mod – (6) .
This Post is suspended by Mod – (6) .
Posted by saline tinmg on Oct 5, 2013 in Cover Faces, Moderator, Myanmar Gazette | 1 comment
ငပလီ သံတွဲမြို့မှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို လက်ကိုအပိုင်ကြိုးချည်ပြီးမှ စိတ်တိုင်းကျခုတ်သတ်မီးရှို့ခဲ့သည့်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုများ
ရခိုင်ပြည်နယ်ငပလီ သံတွဲမြို့နယ်အတွင်ရှိ သဗြုချိုင်၊ပေါက်တော၊ရွှေလှေ၊လင်းသီ
မဲကျွန်း၊ဒွါရာဝတီမြို့သစ်၊ကျောက်ကြီး၊ကျီးကန်းရဲကျေးရွာ များတွင် နေထိုင်လျှက်ရှိကြသည့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသာကမန်လူမျိုးးအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို
ရခိုင်တိုးတက်ရေးပါတီ၊၉၆၉ နှင့် အမျိုးဘာသာသနာထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး
အမည်ခံ စုးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသောရခိုင်ပြည်နယ်ခွဲထွက်ရေး ရခိုင်လွတ်မြောက်
ခေါ်ယူထားပြီး စိတ်ကြွဆေးများနှင့် ရောထားသောအရက်များကို
သောလူထောင်နှင့်ချီသောအကြမ်းဖက်သမားများကို ကျေးရွာမှထွက်ခွာချိန်တွင်လည်းသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်၊ရဲနှင့်တပ်တို့မှလုံးဝဟန့်တားခြင်းမရှိ၊ လမ်းခရီးတွင်လည်းပိတ်ဆို့တားဆီးခြင်းမရှိ၊ ဖျက်ဆီးခံရမည့်ကျေးရွာများသို့
ရာတို့မှ လမ်း ဖွင့်ပေးထားပါသည်။
အဖျက်ဆီးခံရမည့်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ရွာသာများမှမိမိတို့အစီစဉ်ဖြင့်တာဆီးဟန့် တားမှုဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့်ရွာထဲမှသို့မ၀င်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါကသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ရဲ နှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များရောက်ရှိလာပြီးဟန့်တားသလိုဝင်ထိမ်းသလိုပုံစံမျိုးဖြင့်အဖျက်ဆီးခံရမည့်အစ္စလာမ်ရွာများမှအစ္စလာမ်ရွာသားများထံမှဒုတ်ဒါး လက်နက်များကိုသိမ်းယူ ကာအကြမ်းဖက်သမားများ၊ရွာတွင်းသို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်အထိအစ္စလာမ်ရွာသားများကိုနောက်ဆုတ်စေခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်သမားများဝင်ရောက်မီးရှိုဖျက်ဆီးသတ်ဖြတ်ခွင့်ရ အောင်အကူအညီပေးခဲ့ကြောင်းရွာခံများမှာအခိုင်အမာသတင်းပေးပို့ပါသည်။
များသည်အစ္စလာမ်ရွာများဖြစ်သည့် သဗြုချိုင်၊ပေါက် တော၊ရွှေလှေ၊လင်းသီမဲကျွန်း၊ဒွါရာဝတီမြို့သစ်၊ကျောက်ကြီး၊ကျီးကန်းရဲကျေးရွာ များတွင်ရွာသို့လာရောက်တိုက်ခိုက်သောအခါအစ္စလာမ်ရွာသားများပြန်လည်ခုခံသဖြင့်နောက်ဆုပ်သွားခဲ့ပါသည်၊ထိုအခါ၊သက်ဆိုင်အာဏာပိုင်များ၊၉၆၉အဖွဲ့အရေခြုံ ၀င်းကိုလေးဦးဆောင်ထားသောမြို့မိမြို့ဘဟန်ဆောင်
လေးခွမျာားကိုသိမ်းယူသွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်သမားများကိုဖုန်းခြင့်အချက်ပြခဲ့ပါသည်၊ထိုနောက်အကြမ်းဖက်သမားများလာရောက်တိုက်ခိုက်သောအခါရွာသားများမှာခုခံရန် လက်နက်မရှိတောဘဲ၊သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်၊ရဲနှင့်စစ်တပ်တို့သည်လည်း ရျှောင်ထွက်သွားကြသဖြင့် အကြမ်းဖက်သမားများသည် ရွာတွင်းသို့စိတ်တိုင်းကျဝင်ရောက်ပြီး ပစ္စည်းလု၊အိမ်များကိုမိးရှိူဖျက်ဆီးကာ၊
သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်ဟု့သဗြုချိုင်ရွာသားများမှအခိုင်အမာပြောကြားကြပါသည်၊အခြားတောင်အောက်ဖက်မှရွာသားများက ထိုအကြမ်းဖက်သူများကို တားဆီးခုခံရန်လိုက်လာသောအခါ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်အာဏာပိုင်များမှမလိုက်လာနိုင်စေရန်
သေနတ်ဖေါက်ကာတားဆီးထားပါသည်။ထိူသည်မှာအကြမ်းဖက်သမားများစိတ်ကြိုက်ဖျက်ဆီးခွင့်ရအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှ ပြောကြားပါသည်။ထို့ကဲ့သို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပြုလုပ်ခြင်းမှာလည်းထိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အာဏာပိုင်များသည်ရခိုင်ခွဲထွက်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မှငွေကြေးမြောက်များစွာကို လက်ခံရယူခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းခိုင်လုံသောခိုင်လုံစွာသိရသည်။
သံတွဲဒွါရာဝတီကွက်သစ်တွင်အကြမ်ဖက်သမားများဖျက်ဆီးနေသောအခါလည် စိတ်ကဆေးများကိုအလျှံပယ်ထုတ်ပေးကာအရက်များတွင်ထည့်ပြီစိတ်ကြိုက်သောက်သုံးစေကာအစ္စလာမ်ဘာသ၀င်တို့၏အိမ်များဆိုင်များကိုစိတ်တိုင်းကြပစ္စည်းလု၊လူသတ်မီးရှို့မှုများပြုလပ်ခဲ့သော်လည်းသံတွဲအာဏာပိုင်များရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲတပ်ရင်းများ ၊စစ်တပ်မှလုံးဝဟန့်တားထိန်းသိမ်းခြင်းမရှိဘဲလွတ်ပေးထားပြီးအကြမ်းဖက်သမားများအစ္စလာမ်အိမ်ခြေများအားကိုဖျက်ဆီးလုယက်သတ်ဖြတ်မှုပြီးဆုံးသည်အထိရပ်ကြည့် နေခဲ့ကြသည်ကိုအားလုံးမျက်ဝါးထင်ထင်မျက်မြင်ဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် မီးသတ်ဌာနတို့မှလည်းမီးလောင်နေသောအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တေို့ပစ္စည်းများအိမ် ယာဆိုင်ခန်းနှင့်လူများမီးလောင်နေများကိုလုံးဝမီးသတ်ခြင်းမရှိဘဲ အမိန့်မရဆိုကာလာရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။ယခုသံတွဲတွင်
ကြီးတစ်ဦးကပြန်ပြောပြပါသည်။ယခင်ရှိနေသော၅၆၆ တပ်မှာမှု အရေးအခင်းဖြစ်
တားသဖြင့် အဆင်ပြေပါသည်.ယခုအခါ ထို စစ်တပ်အား သဗြုချိုင်ရွာသို့ပို့ဆောင်.
များအား ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း ကိုရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကခွင့်မပြုကြောင်း
လှုလိုသူများရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကိုသာပေးရန်ဆိုကာပြောဆိုပါသည်ဤသည်မှာ ထိုဒုက္ခသည်များ၏အလှူငွေများကိုဖြတ်စားရန်အစိုးရ၏ဖြတ်စားလုပ်စားအကြံအစဉ်ဖြစ် ပါကြောင်းစေတနာကောင်းဖြင့်မောင်းခပ်လိုက်ရပေသည်။
သဂျီးရေ ဟောဒီမှာ ပြဿနာ ဖြစ်မယ့် ပို့စ်တွေကိုပဲ ဘလက်ဘရားသားဂိုဏ်းက ကုသလ အမျိုးကောင်းသားတွေ ရေးနေကြတယ်ဗျ။